Bahanan’ireo Manampahefana Omani ny Fidirana amin’ny Gazetiboky Mowatin Ety Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Bahanan'ireo Manampahefana Omani ny Fidirana amin'ny Gazetiboky Mowatin Ety Anaty Aterineto
Voadika ny 05 Mey 2017 16:03 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, Italiano, English
Sary graffiti -n'ny sivana tao amin'ny Pixabay. CC0, sehatra ho an'ny daholobe.
Ny 3 May, nobahanan'ireo manampahefana Omani ny fidirana amin'ny Mowatin (teny arabo ilazàna ny ‘olompirenena’), ilay gazetiboky tsy miankina ety anaty aterineto.
tandremo: teo aloha kely teo, naharay tatitra izahay hoe tsy ho azo atao ny hiditra amin'ny tranonkalan'ilay gazetiboky avy ato anatin'ny Soltanà an'ì Oman, ary mety ho ny manampahefana no nibahana ilay tranonkala.
tandremo: noho ny fibahanana ny tranonkalan'ilay gazetiboky ao anatin'ny faritry ny Soltanà an'i Oman, torohevitray ho anareo mpamaky ny hampiasàna VPN iray afaka hidirana amin'ilay tranonkala.
Natomboka tamin'ny Jona 2013 ny Mowatin, gazetiboky iray tsy miankina ao Oman izay miresaka lohahevitra marobe isankarazany ao Oman sy ny Golfa Arabika, tafiditra amin'izany ny politika, ny zon'olombelona ary ny toekarena. Ny Janoary 2016, nanambara fampiatoana ny asany ilay gazetiboky noho ny “antony tsy miankina aminy”, indrindra fa noho ny faniriany “hiantoka ny fandriana fahaleman” ireo mpanao gazety sy mpanoratra ao aminy. Niharan'ny tsindry sy filàna vaniny avy amin'ireo manampahefana Omani ireo mpanao gazety ao amin'ilay gazetiboky, indrindra fa ireo manampahefana avy amin'ny Internal Security Services (ISS), ilay sampam-pitsikilovana ho fiarovam-pirenena ao an-toerana.
Tao anaty lahatsary iray nivoaka tamin'ny 25 Aprily, nilaza ilay gazetiboky fa hanohy ny famoahany avy any Londona, ny 3 May teo, nandritry ny fankalazana ny Andro Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety. Kanefa, ora maromaro taorian'ny namerenany namoaka lahatsoratra, nitatitra ilay gazetiboky sy ireo vondrona mpiaro zon'olombelona fa nobahanana ao anatin'i Oman ilay tranonkala.
Ilay fanapahankevitra hibahanana no farany indrindra tamin'ìreo andianà fepetra famoretana nataon'ireo manampahefana Omani, ampahany amin'ny famoretana midadasika be ataon'ny firenana amin'ireo media tsy miankina. Ny volana Aogositra tamin'ny taona lasa, namoaka didy ny minisitry ny fampahalalambaovao hanakatonana ny gazety tsy mainkina Azamn izay nanao tatitra momba ny fitsabatsabahan'ny governemanta amin'ny raharahan'ny fitsaràna. Telo tamin'ireo mpanao gazety tao amin'ny Azamn, ka isan'izany ny tonian-dahatsoratra, no nogadraina sy nohelohina noho ireo vesatra ahitàna ny hoe “fanohintohinana ny filaminambahoaka” sy “fanimbàna ny voninahitry ny Fanjakàna”. Raha tamin'ny Oktobra, gazety iray hafa tsy miankina, ny Albalad, no nampitsahatra ny asany, noho ny tsindry avy amin'ny governemanta.
Tiorkia 5 ora izay